Nezvedu - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
WELCOME TO SUKO POLYMER MACHINE TECH
Inowanikwa kuchamhembe chikamu cheChangzhou, Jiangsu Province, fekitori yedu yakasarudzika kune yayo yepamusoro tekinoroji uye akangwara michina.
Chiono Chemubatanidzwa: Kuti uve wekutanga brand yepasi peye fluoroplastic michina mukati memakore matatu.
Basa: Rega mafekitori ese e fluoroplastic ashandise-kugona uye michina ine hungwaru kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Maitiro: Kugadzira, kuvhura, kuvimbika, uye kuhwina-kuhwina.
Yakasimbiswa muna 2006, tine makore anopfuura gumi nematatu ekugadzira ruzivo muPTFE / UHMWPE michina yekuwedzera uye michina yezvakakosha zvinoshandiswa mumunda wepurasitiki kugadzira.
Nyanzvi muPTFE / UHMWPE extrusion uye zvigadzirwa mumhando dzakasiyana siyana uye mamodheru, Suko anogara kumberi kweiyo Tetrafluorohydrazine indasitiri nehunyanzvi hwekuvandudza, hunyanzvi nehungwaru zvese zviri zviviri zvemuno nekunze.
Kuti uve wekutanga mhando ye fluoroplastic michina yepasi rose mukati memakore matatu Rega mafekitori ese e fluoroplastic ashandise-kugona uye zvishandiso zvine hungwaru kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Shanda nesimba Kuti Uve Neramangwana Rakanaka!
Yedu R&D Dhipatimendi
Tisati taendesa michina kana semi-apedza zvigadzirwa zvepa pfefe kune vatengi vedu, tinofanirwa kuita akateedzana ebvunzo kusangana nemhando dzese dzemirau.
Zvivakwa zvedu zvinoita basa rakakosha kutigonesa kusangana nezvinodiwa zvakakwana & zviyero zveindasitiri. Yedu yekugadzira yuniti yakaiswa neazvino tekinoroji yazvino uye zvivakwa zvekuvandudza kugadzirwa uye mhando yezvigadzirwa zvedu.
Nguva nenguva, tinozvisimudzira nehunyanzvi hwazvino uye titore zvese zvivakwa zvinodiwa kuti tipe yepamusoro-notch zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi kune vatengi vedu vanokosheswa.
Yedu Main Machines: PTFE Rod Extruder (yakamira uye yakatwasuka), PTFE Tube Extruder, PTFE Kuumba muchina (Semi-Otomatiki & Yakazara Yega), Sintering Vira, PTFE gasket muchina, nezvimwe.
Main Zvigadzirwa: PTFE tsvimbo, PTFE chubhu, PTFE jira, PTFE chemarata hosipaipi, PTFE firimu, PTFE chisimbiso
Export kuenda kuU.SA, UAE, Saudi Arabia, Korea, India, Russia, Philippines, Indonesia, Malaysia, nezvimwewo Nesimba tekinoroji rutsigiro uye maitiro ekuraira vatengi.
Zvakanakisisa mushure mekushandira mushure mekushambadzira saiti. Vatengi vedu vakaonga kuda kwedu kwekugona, nekutipa kudzokorora mirairo, iyo inotaura zvakawanda nezvekuzvipira kwedu mukupa kugutsikana kwakakwana kwevatengi.
Isu takazvipira kuTetrafluorohydrazine indasitiri kwemakore gumi apfuura uye tichaenderera mberi mune ramangwana tichipa rubatsiro kuvanhu nekuchengetedza tsika dzakanaka, kukurudzira sangano kuburikidza nekuremekedza mukana wega wega, nekuvandudza sechigadzirwa chekugadzira.